0.1 "Này Jerry, ahoana no ahafahako manao bolongana đồ chơi ny anao?"
0.2 Raha mikaroka ‘manao fitoraham-bola amin’ny banky’ ao amin’ny Google ianao, iray amin’ireo valim-pikarohana soso-kevitra atolotr’i Google dia "azonao atao tsara ny mitoraka blaogy". Mampiseho izany fa misy mpikaroka maro tsy ahitam-bokatsoa izay tsy mahalala hoe Firy no azonao atao amin’ny bolongana – satria ny soso-kevitr’i Google dia mifototra. Ka ohatrinona no azonao amin’ny alàlan’ny fanaovana bilaogy? Mba hamaliana ny fanontaniana, andao hojerentsika ny Internet. Lindsay sy Bjork avy ao Pinch của Yum dia nanao $ 85.000 mihoatra ny $ 2016 tamin’ny vola miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay). Pat Flynn avy amin’ny Thu nhập thụ động thông minh dia nahazo $ 160.000 tamin’ny Desambra 2017. Matthew Woodward dia nanao $ 25.000 mihoatra ny $ 2017 tamin’ny volana Desambra. Ny karazana fidiram-bola azoko avy amin’ireto tatitra momba ny fidiram-bola ireto dia: Azo atao izany! Ny mpitoraka blaogy dia manao vola amin’ny Internet, ary Amin’ny hevitra sy paikady mety, tsy misy fetrany ara-bakiteny ny habetsahanao azonao atao ao anaty aterineto. Ity dia mitondra any amin’ny fanontaniana manaraka … Ahoana no ahazoan’ny mpamaham-bolongana vola? Misy fomba tsy misy fiafaràna mba hahazoana vola avy amin’ny blôginao. Biểu ngữ quảng cáo. Chi nhánh mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Famatsenana fanatsarana. Inona no an toàn tsara indrindra? Arakaraky ny maha-indostrianao anao sy ny toerana misy ny blôginao dia hery fomba tsara kokoa handraisana ny blôginao. Gael Breton avy amin’ny Author Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia, amin’ny. Mô hình kinh doanhTotal vola miditraFandaniana tanterakaProfitProfit Margin Dịch vụ $ 21,508 $ 2,805 $ 18,703 666% Bán quảng cáo $ 235,977 $ 135, 041 $ 100, 936 74% Tiếp thị liên kết $ 214,232 $ 47,664 $ 166,568 349% Ny vokatra mivarotra $ 434.004 $ 113,767 $ 320,237 281% Ny saram-pitsaboana matetika dia sarotra ny mivarotra ary noho izany dia miteraka latsaky ny fidiram-bola ny Tombony azo antoka. Maro amin’ireo mpitoraka blaogy ambony no manao bilaogy mivantana sy mivarotra. Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (thứ 2 tốt nhất), fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fifamoivoizana, dia mihena haingana ny marika. Liên kết ara-barotra no tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra, izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona mpivarotra phương tiện truyền thông sosialy roa. Ny fivarotana vokatra ho an’ny vokatra dia mamokatra ny vola miditra indrindra amin’ny marika tombontsoa lehibe. Ny marika dia kely ambany noho ny fivarotana tokotany noho ny vidiny mifandraika amin’ny serivisy mpanjifa, ny fanodinana fandoavam-bola, sns., Fa ny tahan’ny fivoarana ho an’ny mpitoraka blaogy. Hanomboka Raha mamaky mandra-pahatongan’ity dia mbola tsy manana bilaogy ianao đi dia tsy duy trì misitrika loha ianao izao. Pháp maninona no tsy nanomboka teo aloha ianao? Eny ary, mbola tsy tara raha nitsambikina tao. Ity ny ahy dingana iray amin’ny dingana vita amin’ny fomba hamoronana blaogy eto. Vakio ity ary aloha ary miverena amin’ity torolalana manaraka ity. Hiandry aho! 🙂 Được chứ! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika Rehetra dia napetraka ho an’ny volamena … Ahoana no ahafahanao manao bilaogy vola, ho an’ny tena?
2.2 Công cụ tìm kiếm
2.4 Ủy ban Junction
2.7 Inona no misimisy kokoa amin’ny dữ liệu dữ liệu?
3 Lưu lượng truy cập được nhắm mục tiêu
3.2 1. Đăng bài của khách
3.3 3. Facebook thích thú
3.5 Ý tưởng số 3: Manomàna birao iray
4.1 Hành động Makà!
"Này Jerry, ahoana no ahafahako manao bolongana đồ chơi ny anao?"
Amin’izao fotoana izao aho dia mahazo ny fanontaniana "mametraka vola an-tserasera" nam’ny namana sy ny fianakaviana.
Ny sasany maniry manomboka blôgy ary manao fidiram-bola kely amin’ny aterineto. Ny hafa, handositra ny fitohanan’ny fiara miasa, na hanitatra ny orinasa an-tserasera, na hiala amin’ny asa 9 -5, sns.
Tena maniry ny hanampy ireo izay fantatro aho. Saingy, izaho dia afaka mizara betsaka toy izany na mandritra ny fivoriana ataon’ny olona na Whatsapp na Facebook Messenger.
Noho izany, manoratra ity lahatsoratra ity aho mba hizara lesona nianarako ho toy ny mpamaham-bolongana nandritra ny taona 15 farany.
Mampiseho izany fa misy mpikaroka maro tsy ahitam-bokatsoa izay tsy mahalala hoe Firy no azonao atao amin’ny bolongana – satria ny soso-kevitr’i Google dia mifototra.
Lindsay sy Bjork avy ao Pinch của Yum dia nanao $ 85.000 mihoatra ny $ 2016 tamin’ny vola miditra (nijanona tsy nizara tarehimarika marina izy ireo taorian’izay).
Pat Flynn avy amin’ny Thu nhập thụ động thông minh dia nahazo $ 160.000 tamin’ny Desambra 2017.
Matthew Woodward dia nanao $ 25.000 mihoatra ny $ 2017 tamin’ny volana Desambra.
Biểu ngữ quảng cáo. Chi nhánh mivarotra. Mamorona sy mivarotra ny vokatrao manokana. Famatsenana fanatsarana.
Inona no an toàn tsara indrindra?
Arakaraky ny maha-indostrianao anao sy ny toerana misy ny blôginao dia hery fomba tsara kokoa handraisana ny blôginao.
Gael Breton avy amin’ny Author Hacker dia nanadihady ny fomba fitadiavan’ireo bilaogera 23 amin’ny famahanam-bolongana ary namintina izany Ny fivarotana ny vokatrao manokana dia, amin’ny.
Mô hình kinh doanhTotal vola miditraFandaniana tanterakaProfitProfit Margin
Dịch vụ $ 21,508 $ 2,805 $ 18,703 666%
Bán quảng cáo $ 235,977 $ 135, 041 $ 100, 936 74%
Tiếp thị liên kết $ 214,232 $ 47,664 $ 166,568 349%
Ny vokatra mivarotra $ 434.004 $ 113,767 $ 320,237 281%
Ny varotra an-tserasera dia mamokatra vola be (thứ 2 tốt nhất), fa noho ny mpivarotra adiresy hamokatra votoaty marobe ary indraindray mahazo ny fifamoivoizana, dia mihena haingana ny marika.
Liên kết ara-barotra no tena tetikasam-pihariana mahomby indrindra, izay mahatonga azy ho tsara ho an’ny mpamaham-bolongana vaovao izay mila manangom-bola haingana. Ity tranonkala ity dia natokana ho an’ny fidiram-bola avy amin’ny fiarahamonim-pirenena – ary nahavita nitombo avy amin’ny bilaogy iray-olona mpivarotra phương tiện truyền thông sosialy roa.
Ny fivarotana vokatra ho an’ny vokatra dia mamokatra ny vola miditra indrindra amin’ny marika tombontsoa lehibe. Ny marika dia kely ambany noho ny fivarotana tokotany noho ny vidiny mifandraika amin’ny serivisy mpanjifa, ny fanodinana fandoavam-bola, sns., Fa ny tahan’ny fivoarana ho an’ny mpitoraka blaogy.
Raha mamaky mandra-pahatongan’ity dia mbola tsy manana bilaogy ianao đi dia tsy duy trì misitrika loha ianao izao.
Pháp maninona no tsy nanomboka teo aloha ianao?
Được chứ! Koa ankehitriny dia vonona ny blôginao ary isika Rehetra dia napetraka ho an’ny volamena …
Cướp biển ny tsirairay amin’ireo singa manan-danja ireo isika izao.
Ny ratsy indrindra, ity vokatra ity dia vokatra ara-tsakafo ary mivarotra ihany mandritra ny fahavaratra, noho izany dia mbola voafetra ihany aho tamin’ny fivarako. Ny habaka dia tsy mihoatra ny varotra roa isan-taona. Tsy voatery ny fotoanako hanorenana an’io tranonkala io.
Ny lesona amin’ity: Na inona na inona ny fanoratana tsara ny votoatinao na ny Hatsaranao ny endrikao ny bilaoginao – raha tsy manapa-tsakafo mahasoa anao ianao, dia tsy ho afaka.
Nahoana no mitranga bất kỳ amin’ny banky ny tranga toy izany? Satria izany no vola.
Manaova fikarohana mifandraika amin’ny nichanao Google hoặc Bing. Misy dokam-barotra ve ao amin’ny pejin’ny valin’ny fikarohana?
Azonao ampiasaina avy eo Google Planet Keyword Planner Manoritsoritra ny vidin’ny sainam-pirinty ho an’io fikarohana io ary maminavina hoe ohatrinona no azonao atao amin’ny Google Adsense bấm *; ary noho izany, ohatrinona no azonao atao amin’ny fivarotana habaka adiresy.
Mariho fa tsy misy fitipika mazava an-tsoratra fa fanombantombanana be loatra, Google dia mandoa ny 30 – 50% ny vidin’ny klikan’ny Adsense Publishers.
Ny sary eto ambany dia ohatra sasantsasany izay hitako tamin’ny Spyfu Tìm kiếm miễn phí. Ny tsirairay amin’ireo fikarohana ireo dia latsaka kely noho ny minitra 5 mba hamitana azy – ary azoko fantarina ny Tombom-barotry ny ngách amin’ny fandinihana ireo antontanan Misy tsipirian-javatra sarobidy kokoa raha toa ka mihoatra ny fikarohana malalaka isika saingy hifikitra amin’ny famoahana maimaim-poana amin’izao fotoana izao. Mba hanaovana ny fikarohana ataonao dia tsindrio fotsiny amin’ny mpifaninana anao (na ireo mpilalao lehibe ao amin’ny shaiao) amin’ny fikarohana.
Ny tena fiainana marina # 1 – $ 64.000 / tháng.
Niche # 1 – vokatra malefaka, vahaolana raharahambarotra. Misy mihoatra ny orinasa hafa an’ny 10 izay manolotra fandaharam-pikambanana ao amin’ity orinasa ity. Spyfu nanombantombana fa ity mpivarotra ity dia mandany $ 64.000 amin’ny Adwords isam-bolana.
Thích hợp # 2 – $ 100.000 / tháng.
Niche # 2 – Fanatanjahantena ara-panatanjahantena – mieritrereta marika ara-panatanjahantena toy ny Adidas, Nike, ary New Balance, fa amin’ny kely kokoa ary mifantoka amin’ny karazana fanatan. Ity orinasa ity dia mandany mihoatra ny $ 100.000 isam-bolana amin’ny tenifototra maherin’ny 57.000 araka ny Spyfu.
Thích hợp # 3 – $ 60.000 / tháng.
Ny Niche # 3 – mpamatsy solosaina IT – tsena iraisam-pirenena, ny ankamaroan’ny olona izay mitaky tranonkala dia mila izany. Misy 10 – 15 mpilalao lehibe haha ​​amin’ity sehatra ity. Ity orinasam-pandraharahana ity dia manolotra ny tenimiafina 3.846 ao amin’ny Google ary mandany ny $ 60.000 isam-bolana.
Thích hợp # 4 – $ 9.500 / tháng.
Thích hợp # 4 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity orinasa ity dia iray amin’ireo fanombohana mahazatra vitsivitsy taona vitsy lasa izay. (Gaga aho mahita azy ireo mandany efa ho $ 10.000 isam-bolana amin’ny adwords).
Thích hợp # 5 – $ 71.500 / tháng.
Niche # 5 – Vokatra ara-bola manerantany. Ny sary nalaina dia ny fanadihadiana iray amin’ny iray amin’ireo mpilalao lehibe indrindra amin’ity sambo ity. Nanana tranonkala roa tao amin’ity orinasa ity aho niverina tao amin’ny 2000 – tsy ho gaga raha mahita orinasa mandany mihoatra ny $ 100.000 isam-bolana amin’ny adwords.
Thích hợp 6 – $ 24,200 / tháng.
Thích hợp # 6 – Mpanome tolotra tranonkala. Ity tranonkala ity dia tranonkala iray ary tsy mivarotra ny vokany manokana. Ny tompon’ny tranokala dia mandany vola mihoatra ny $ 20.000 isam-bolana amin’ny dokambarotra PPC.
Fomba iray hafa ampiasaiko matetika mba hitaràna ny Tombotsoan’ny hốc iray dia mijery ireo isa ao Ủy ban Junction (CJ).
J bd ny sary etsy ambany mba hahatakarana ny fomba handikako ny isa ao amin’ny CJ.
Fandanian’ny tambajotra = Manao ahoana ny habetsahan’ny mpividy raha oharina amin’ny ankapobeny. Hahazoana harena ambony kokoa = fidiram-bola bebe kokoa amin’ny chương trình; Volan’ny 3 EPC = salanisa isaky ny klioba 100 = Ny Tombony azo antoka dia ity chương trình afiliana ity amin’ny fotoana maharitra; 7 andro EPC = salanisa isaky ny klioba 100 = ity vokatra ity?
Ny haino aman-jery sosialy lehibe indrindra eran’izao tontolo izao dia tena fitaovana lehibe hahafahanao manazava ny vaika vaovao azonao. Fantaro bebe kokoa momba ny mpihaino kendrena anao, ampio ny mpifaninana aminao, tadiavo ny zoro iray hamehezana ny hốc anao, sy ny sisa.
Raha efa manana ianao Trang Facebook (afaka mamorona iray ianao alohan’ny hanombohana blôgy, afaka maimaim-poana), ny toerana voalohany Hijerena ny fanorenanao. Alefaso bất kỳ amin’ny sasany amin’ireo fanatanjahan’ireo mpankafy ireo ary tandremo ny demografika (lahy / virl, toerana, manambady / tokana / nisara-panambadiana, taona.
Nhóm Facebook Mifandraisa am-piangonana – vakio ny resadresaky ny mpampiasa mba hahatakatra ny olana sy ny filany.
Ho an’ireo izay manana pejy Facebook dia mandehana ao amin’ny Insights> Tổng quat> Đồng hồ Pejy ho. Ity no hitanao ary ampitahao ireo pejy mitovy soso-kevitry Facebook. Azonao atao tsindriana amin’ny rohy tsirairay mba hahitanao ireo lahatsoratra malaza nivoaka tao amin’ireo pejy ireo.
Ireto đau khổ soso-kevitra sasantsasany:
Hamafiso amin’ny lahasa iray vaovao amin’ny fijerena ireo hetsika mpilalao hafa – Izany no nahitako ny karazan-tsindrim-borona Rehefa nandalina ny bilaogy CSS / jQuery / HTML5.
J bd hoe nahoana ny olona no mividy amin’ny mpifaninana aminao – Afaka manome zavatra mitovy ve ianao ary manangom-bola?
J bd hoe nahoana ny olona no tsy mividy amin’ny mpifaninana aminao – Manahirana loatra ve ny vokatrao? Angamba tsy manakarama izany marina izany. Afaka manao zavatra tsara kokoa ve ianao ary mahazo ny mpitsidika azy?
Manorata lohateny lehibe sy votoatim-baovao – Fantaro hoe iza amin’ireo lahatsoratra ao amin’ny Facebook no mahazo ny fidirana ambony indrindra, manorata lohateny toy izao.
Ny lavaka lava vava amin’ny teny malemy (tín dụng: Alefaso any amin’ny Fox).
Ny fikarohan’ny sokajy dia matetika atao bất kỳ am-piandohan’ny fanentanana SEO. Ny tanjon’izy ireo, matetika kokoa noho ny tsy, dia ny mamantatra matetika ny teny fanalahidy notadiavina (ho fohy na lava lava) ary mametraka lalana ho an’ny fanentan.
Inona no misimisy kokoa amin’ny dữ liệu dữ liệu?
Saingy satria fantatry ny ankamaroan’ny mpividy mpividy – betsaka kokoa ny mampiasa io tahirin-teny fototra io. Miaraka amin’ny votoatin-teny manan-danja dia azontsika atao ihany koa ny mahatakatra ity manaraka ity kokoa (ary mety ho hita koa ny fahafaha-manao fandraharahana vaovao)
Ohatra: Ho an’ny fakantsary – Nikon, Canon, Sony; ho an’ny mariazy – Bali, Maldives, Hawaii; ho an’ny tranonkala – iPage, Bluehost, Hostgator; ho an’ny olo-malaza – Taylor Swift, Linkin Park, Bruno Mars.
Amin’ny ankapobeny, ny fividianana mividy dia avo kokoa raha be ny karoka momba ny ‘famerenan’ny Widget’, ‘ny sarisary modely ary ny anarana’, ’10 thương hiệu phụ tùng tốt nhất ‘,’ Mifanohitra amin’izany, ny fikarohana momba ny ‘tantaram-pifandraisana’, ‘fitarainana widget’, na ‘ny fanaovana Widget’ dia mety hiova ho fifanakalozana ara-barotra.
Tamin’ny fotoana voalohany nanombohako, maro ireo webmaster (mariho – dia mbola niankina tamin’ny fitaovana iray antsoina hoe "Overture") – izay ahafahanao mametraka fomba fikarohana tsotra fotsiny ny ‘mpitoraka blaogy’ ary ny rafitra dia hanome endrika sarotra anao indraindray io teny io dia mikaroka Aminay dia ampitahao ireo isa ireo miaraka amin’ny habetsaky ny valim-pifidianana ary hitara ny fifaninanana (ary ny Profit).
Ny Google Keyword Planner dia iray amin’ireo fitaovana maotina vitsivitsy ampiasaiko amin’izao fotoana izao (raha azonao atao ny mandoa vola, manoro hevitra AHREFS ary Aza maimaika).
Ny sarimihetsika filma dia iray amin’ireo zanako indrindra. Tsy manangona azy ireo aho fa mankasitraka ny Hatsaran’ny zavakanto sy ny fahatsiarovan-tena ao amin’izy ireo. Andeha hojerentsika raha afaka mampitodika ny fahalianako amin’ny hevitra bilaogy mahasoa izahay. Mariho fa tsy nanao fikarohana aho Talohan’ny nanoratako ity torolàlana ity – ka dia mahaliana ahy toy ny amin’izao fotoana izao.
Xu hướng Google của Alefaso aloha ny.
Rehefa mivoatra dia afaka mahita koa izahay fa ny ankamaroan’ny mpikaroka dia bất kỳ Etazonia, Kenya, Inde, Aostralia, ary Kanada.
Mba hahatakarako tsara kokoa ny tabilao, matetika aho dia mampitaha ny fironana tsy fantatra amin’ny zavatra fantatro. Amin’ity ohatra ity dia nampidiriko ny teny hoe "lưu trữ fanamarinana". Hitanao fa misy olona maro kokoa mitady "sarimihetsika".
Công cụ lập kế hoạch từ khóa Google Planet
Tsindrio ao amin’ny "sarimihetsika" amin’ny sarimihetsika ary tsindrio "Có ý tưởng".
Ny pejy voalohan’ny pejy (j bd eto ambany) sarimihetsika sarimihetsika, sarimihetsika malaza (3.400 + fikarohana horonantsary), Hollywood afar sarimihetsika (Fikarohana 1.600 + isam-bolana), sy ny sisa. Misy ihany koa ny fangatahana avo lenta kokoa momba ny famoronana ny sarimihetsika fimailo (~ 22.000 fikarohana).
Endri-tsoratra manan-danja amin’ny Google Maps Công cụ lập kế hoạch chính.
Fehezanteny manan-danja ahitana ny "Làm Poster phim" – ireo mpikaroka ireo no tena mitady ny lesona sy fitaovana fanontam-pirinty.
Miverina bất kỳ amin’ny Tìm kiếm Google
Ahoana raha tsy te hivarotra vokatra ara-batana isika? Fantatrao – tsy dia mahafinaritra loatra ny fanodinana sy ny hậu cần. Afaka miblaogy sy mivarotra sehatra dokam-barotra fotsiny ve isika? Mba hamaliana ity fanontaniana ity dia andramo ny fikarohana sasantsasany ao amin’ny Google ary Hijerena raha afaka mahita ny mpizarazara na ny chương trình afiliana isika.
Azonao atao ihany koa ny mijery akaiky ny dokam-barotra amin’ny dokam-barotra amin’ny dokambarotra – moa ve izy ireo mamorona dokam-barotra eny an-dalam Raha eny, inona ny song? Afaka mivarotra mivantana mivantana amin’ireo mpivarotra ve ianao? Manome toky ny Tombombaran’ity lohahevitra ity, dia afaka mampihatra ity data ity fanalahidy ity amin’ny Spyfu izahay mba hamaritana hoe Firy ny mpizarazara no mandany.
Mba handinihana lalindalina kokoa, mety te-hibitsika amin’ny valin’ny fikarohana biolojika isika (tranokalan’ny rohy, ny fanatsaràna ny onjam-peo, ny h fifaninanana momba ny SEO.
Ankehitriny dia manana ny tsenan’ny tsena Rehetra ilaina isika – fotoana hanapahan-kevitra. Tokony hitambikina ve isika? Tena tsara tokoa ve izany? Inona no mety ho fiantraikany amin’ny fanatonana izany? Havelako ho anao ny fanatsoahan-kevitra.
Zavatra iray, na izany aza, maniry ny hamoaka mazava aho alohan’ny hamaranana ity fizarana ity – dia ny momba ny fanapahan-kevitrao amin’ny hốc.
Maro amin’ireo manam-pahaizana no manoro hevitra vaovao mba herorohana ny fifaninanana SEO tsy hivezivezy ary yourafidy karazan-tsarimihetsika kely kokoa Rehefa misafidy.
Mino ny mifanohitra amin’izany aho. Tokony hanandrana ny dobo goavana ianao (teny filamatra eo amin’ny fikarohana miaraka amin’ny fangatahana avo lenta sy ireo mpifaninana lehibe) satria io no misy ny mpijery.
Hifindra amin’ny lanjan’ny singa # 2: izao isika được nhắm mục tiêu
Mba hahazoana vola mendrika ao amin’ny blôginao dia tsy duy trì misintona fifamoivoizana azo itokisana ianao.
Kitapom-pahefana tsotra izany – Aleo lazaina fa ianao dia mitantana bilaogy DIY sy mivarotra zavakanto. Ny tahan’ny fanodinana ny blôginao dia 3% ary ny sandan’ny fanovana dia $ 25. Amin’ny ankapobeny, ho an’ny mpitsidika Rehetra 100 ianao dia hanao ny fivarotana 3 ary manao isan’ireo mpitsidika manana lasibatra, avy eo ny tsengika dia hery fivarotana enina ary $ 150 mahasoa ny lalana.
Raha toa ianao ka tsy mampiasa ny tranonkala havanana mba handinihana ny fandrosoana sy ny fandikana tsara ny tranokalanao, dia mety haka dingana roa ianao raha tokony ho dingana.
J bd aloha, Google Analytics ny tatitra dia mety ho mahery vaika. Maro ny isa! Ary mety tsy ho fantatrao ny sasany amin’ireo metika na hevitra.
Eo am-pahatsoram-po dia tsy mieritreritra aho fa tokony handany andro be loatra ny mpamaham-bolongana amin’ny fametahana tatitra Google Phân tích.
Mandehana tsotra. Ny tanjonao dia ny hanangana blôgy tsara kokoa ho an’ny mpampiasa anao, fa tsy mandany ora maro aorian’ny ora fianarana ny teknika ao ambadiky ny Google Phân tích.
Phiên / người dùng đã mua
Sampan-Drainharahan’ny fifamoivoizana / giấy giới thiệu
Google Analytics (thu nhập> Ny fifamoivoizana> Loharano / Fampahalalana)
(Mba hahitana ity nomerao ity dia midira ao amin’ny Bảng điều khiển Google Analytics> Fitondràna> Nội dung trang web> Tất cả các trang.)
Habe kokoa noho ny fandraisana anjara amin’ny phương tiện truyền thông sosialy
Na inona na inona ny fomba famakian’i Google ny fomba amam-pivahinan’ny vahiny – io paikady io dia miasa. Ny fanoratana lahatsoratra amin’ny Hatsaran’ny mpitsidika amin’ny bilaogin’olon-tsotra fotsiny no fomba mahomby indrindra hanatratrarana ireo mpihaino kinendry ary hananganana
Ny fanalahidin’ny fahombiazana, raha ny fahitako azy, dia ny mahita ireo bilaogy tsara – ireo izay manana mpamaky marina sy mpanaraka ny media sosialy. Azonao ampiasaina Topsy hoặc Buzz Sumo ny mahita ireo bilaogy malaza sy ny mpikatroka ao amin’ny orinasanao. Na, afaka mandinika akaiky ny faritra fanehoan-kevitra ianao raha te hahalala raha mifanerasera amin’ireo bilaogera ireo mpamaky. Aza hadino hatrany fa mitoraka blaogy ho an’ny mpamaky tena ianao (noho izany dia zava-dehibe ny kalitao atiny). Aza hadino ny mandefa bilaogy manana Google PR avo lenta fa ny mpamaky tsy misy fiasa – tsy mandeha amin’ny 2015 intsony ity fanao ity.
Biraon’ny Crowdsource amin’ny valiny tsara.
20 toro-hevitra ara-tsosialy phương tiện truyền thông sosialy avy amin’ny manam-pahaizana
3. Facebook thích thú
Alefaso amin’ny vừa phải ebook tsara izany. Ireto misy vitsivitsy avy amin’i HubSpot.
Manamboara cover (tức là Canva) na mandoa an-tserasera iray hanao izany (mpamorona iray tsy miankina ~ $ 26 / ora averina araka ny fijeriko ny fandaniana)
Liên kết tiếp thị dia mety ho loharanom-bola lehibe ho an’ny asa fanampiny fanampiny. J bd ireto hevitra ireto mba hampidirana ny varotra afrikana amin’ny fidiranao:
Alefaso aloha ireo lahatsoratra efa navoakany sy tadiavo ireo vokatra na serivisy voalazanao. Raha vao hitanao izy ireo, mandehana fotsiny any amin’ny tranokala tsirairay ary mitadiava pejy "Chi nhánh".
Mandehana bất kỳ amin’ny tranokalan’ny vokatra tsirairay ary j bd raha manana pejy mifandray izy ireo. Raha manao izany izy ireo, misoratra anarana amin’ny chương trình.
Không có tolo-kevitro:
Raha manana chương trình afrikana ny vokatra, dia mety tena izy izany.
Voalohany, ataovy lisitry ny vokatra / tolotra tianao hampiasaina. Avy eo dia mandehana any amin’ny vohikalany ary j bd raha manana chương trình afilialy ry zareo.
4- Mampirisika ny vokatra avy amin’ny fikambanana amin’ny mailaka trả lời tự động
Ny mailaka dia fitaovana tiếp thị mahery. Iray amin’ireo fantsona vitsivitsy arahin’ny olona isan’andro izy io vonona ny hivarotra.
Tahaka ny fampiroboroboana vokatra avy amin’ny orinasan-tserasera ao amin’ny blôginao, ny fampiroboroboana ireo vokatra ireo amin’ny mailaka autoresponder dia afaka mamokatra fidiram-bola.
Azonao atao ny mampiroborobo mivantana azy ireo amin’ny mailaka na mamorona torolalana lahatsoratra bilaogy ary hampiroborobo ireo. Na izany na tsy izany, dia afaka mahazo vola nào.
Mipetraha amin’ny fifandraisana fananganana mailaka, toy ny fangatahana ireo mpandray anao raha afaka manampy azy ireo amin’ny zavatra ianao. Hanorina fitokisana koa izany ary hampihenana ny anaran’ny soratra.
Ý tưởng số 3: Manomàna birao iray
Tafiditra ao amin’ny birao job ny mpiasa mitady mpiasa. Afaka manolotra sehatr’asa feno amin’ny fotoana feno izy ireo, amin’ny fotoana sasany, na amin’ny fifanarahana.
Raha manana fahefana eo amin’ny toerana misy anao ianao ary afaka mifanandrify amin’ireo mpikaroka momba ny asa dia afaka mandray birao miasa ary mahazo vola isaky ny.
Ny fomba tsara indrindra handrafetana ny blôginao: Quảng cáo, Tiếp thị liên kết, fivarotana vokatra sy serivisy.
Hành động Makà!